KU DA,AYARTA IYO DHALINYARDDA JAMHUURIYADA SOMALILAND ” MA, I MAQLAYSA, DA,YARTA IYO DHALINYARTA JAMHUURIYAD BARAKAYSANEY.W/Q AXMED ABOKOR | Berberatoday.com
KU DA,AYARTA IYO DHALINYARDDA JAMHUURIYADA SOMALILAND ” MA, I MAQLAYSA, DA,YARTA IYO DHALINYARTA JAMHUURIYAD BARAKAYSANEY.W/Q AXMED ABOKOR
HADDA MA IGULA A SOCOTAAN DA,YARTA IYO DHALINYARTAY FURSADAHA JIRA EE U BAAHAN DIYAAR-GAROW DHAB AH ?
Da,yarta iyo Dhalinyarda Jamhuuriyad Somaliland Fursadaha inagu waajibka inaynu ka soo baxno siddee ugu hagagna ?
Waad aragtaan halka Qaranka loo hogaaminaayo,e hadhka cad ee Maalinta ah mid Xisbi Muxaafidka ah iyo mid Mucaaradka ah ba door bideen si ma naaxanimo ka muuqata iyo is maqiiqeed .
Da,yarta iyo Dhalinyarada ma Daawadayaal iyo Taageero, Mudaaharadayaal uun ayaa iska ahaannna. Mise kaalinta mudan inaan ka soo baxno ayaa ku hiranna si aynu u gudano waajibkeena muwaadinnimo iyo ka Da, yarta ahaan iyo dhalin yarraba, ta ah howl gelidda iyo u diyaar ahaanta hanashadda iyo qabbadda Hogaanka Qarankeenna wakhtigan iminka aynu ku jirro iyo ka foodda inaagu soo hayaba.
Waraabow bood, oo xagga hil-baha u ,bood ayey kagga dhegeen Golaha Guurtidu arinka la Xidhiidhay muddo kordhonta Wakiilladda iyagga laftigooda ba ee ay shalay gacanta u tageen markii shanaad., hasa yeesh waa la siiyey fursada iyaddaha ,waanna u halabsadeen sidday aheyd iyaggo , toodda Shikhsiyanka ah ka eeganaya.
Da,yarta iyo Dhalinyarada Jamhuuriyada Somaliland ayaa fursad aad u muhiim , halkan ay ugu jirta waa haddii aynu u garanno oo u fahmaan sidda ay tahay.
Fursada waa iyagga hadda bilaaba diyaar garow qisdigsu yahay siddii Xisbiyadda la furi-doono haddi rabb idmo, waa waxiii nool ee gaadha u sii dhiillo-toshaan inta ay goori-goor tahay , ugga qayb heli lahayeen 2022 Doorashadda Ururada.
Siddanna diyaar ugu sii noqon lahayeen siddii loo bedeli lahaa Jiilka 1940 50 ,60 iyo 70 ee girgirka hogaanka Jamhuuriyada Somaliland ka la lada,aa. ee u baahan in lagga fujiyo mar,uun.
Da,yarta iyo Dhalinyarada ahaan kumma jirto inaynj noqonno kuwo dhowrkii sanaba Awrka lagu kacsado dabadeed aan labba cali dib isu weydiin kaalintoodda iyo juhdigooda ay geloyeen guulaha Xisbiyada Qabiilka noqday ee lagga duway hanaankii waanaagsan ee aynu baahan nahay.
Waxa laggama maar maan ah in Da,yarta iyo Dhalinyarada in aynu Aqoonsanahay in markeenna Hogaanka Qaranka u hoolan, qabbanno, oo hogaamino . Waxa aynu qaadan karrno maha ayaan qabba in maalin waliba aynu daawade , soo dhaweeye, sii dhaweeye taageero iyo sacab-tumme iyo mudaaharade u noqon jiilka 1940-50-60-70 ee ay waajibka inaggu tahay inaanu farro-gorgor kagga furfurro Hogaanka Dalka iyo Talintiisa.
Da,yarta iyo Dhalinyarada Jamhuuriyada Somaliland sidda aynu aynu dhaqanno ee dhugano ayey ku danbaynaysa Qarannimada Qarankeennu. Geeska afrika inaynu Siyaasad iyo hogaan aan hore uga tisqaadin ka dhidibno ayey tahay imkinka iyo hadhowba , waxayna ku xidhan tahay haddba sidda aynu daacad u noqon uguna hawl-gallo ugunna diyaar-garowno.
Waxa sharci noqotay , isla markaan hirgashay in Da,yarta Aqoon-yahanka ah iyo Dhalinyarada ku jira qaybaha kala duwan baradhadda Aqoonta in dhowrkii sanno laggu guraayo . Maxa diiday ? inay noqoto 2022 waxii ka danbeeya in Da,yarata iyo Dhalinyarada ay markooda noqdaan kuwo ku guuraaya 70 -80 Jamhuuriyada Somaliland wali u haqal-taagaya inuu ku sii jirto siyaasadda inaynu ka fadhiisino, halkaan Da,ayartu iyo dhalinyardda 20 – 45 u dhaxaysa noqdaan kuwa hogaanka Qaranka noqdda.
Waa ognahay ta Maanta taagan ee Xisbiyadda iyo Xukumadda ahi in Ninkasta iyo xisbi kasta oo hogaanka haya sidda iminka Xisbi-tallada haya u dhaqmaayo ayey dhamaantood u dhaqmi lahayeen. Waan aragnay halka ay ku Biyo, shubatay dagaalkii adkaa iyo juhdigii ee Da,ayarta iyo dhalinyaradu ku garab siiyeen amma isla garabtaan Xisbiga Kulmiye 2022 ,2003 2005 iyo 2010 . Marka uu xisbigsi tallada Dalka qabtay waxa weyn uu bedel oo Da,yarta iyo dhalinyarta gudaha, u horseeda ma jirto marka xaqiida iyo dhabta xageeda u kacno- waxa uu tagay waa ta Maanta taal iyo tii inna soo martay ee aynu marag iyo markhaatigeeda nahay .
Waa ognahay Da,yarta iyo dhalinyaradda inaan dhaaan Xisbiyada hadda jirra dhexdood wax qaderin oo mug iyo miisaan ah ayna ku lahayn , waxa inta soo rack a ka biya-diida hababka iyo qaabka Mucaarad iyo muxaafidba isku dayeyo inuu wax ku waddo markiba daaqada ayaa lagga saarra oo macnaheedu yahay Xisbiyadda hadda aynu haysan ma ah kuwo ah qaranka eee waa kuwo qofka gudoomaiya ah yeelanaayo sidda uu doono ka yeelaayo . Waxa iyadduna Xisbiayada ku lifaaqan oo ku hoos qarsan oo aan ka wada dheregsan nahay Aafooyinka ina dabray ee wax kasta oo horumar iyo haykankii ah Qaranka ka soo ooday oo ah Xisbi-reer mus-danbeedka u yahay siddanna ku yeelaanyo waa haddii ay gudoomiya uu noqdo mid ay isku isir-yihiin. Waa mid innagu dhiiri –gelinaysa in diaar-garow Da,yarta iyo dhalinyaradu yahay mid kaliya ee xal-raadiska noqonaya hore iyo dan baysabba , hore haddi aynu isu abaabulo waa fududaaneysa burrito hasa yeeshe haddii manta laga gws-adegeygo mar kale aroorta amma burrito waa qaybyo inna sugaysa oo siddeed ah .
Marka halka la maraayo Da,yarta iyo Dhalinyarada in hadda kuwaa aynu hore u soo aragnahay iyo kuwa kale oo ka tabba-bar qaatay oo aan yihiin isku da,aa iyo isku dariiqo in haddanna aan u sii sacab-tunno kuma jirto kuwa iyagga ah inaan xaydaabkooda iyo Siyaasadooda at aaminsan yihiin kula jaal iyo garab ahaano oo u hogaanasno. Ta ku dhaqaaideef qadiyadeed ku dhiirashdeedu innagu haboonna tahay waa in Dalka gudahiisaiyo debadisa Da, yarta iyo Dhalinyarada ahaa si wada jir ah u diyaar garow u uga gallno ayaa inaggu haboon oo inagu waajib ah xaqiiqan, waan dariiqadda saxda ee sidda xaalka Dalku Maanta yahay lagu wajihi karro , so loo hello wakhti dhow isbedel mug leh oo ka badbaadiaya Qaranka Aafadda Hogaan xumo iyo dastuur ku tumasho ee innagu habsatay.
Da,yarta iyo Dhalinyarada ahaan waxa ragganimo iyo xilkanimadeed ku jirta Maanta iyo barri iyo saadanbeba oo ah ta inala gudboon , waa inaan ku toosnna siddii aynu isagga qaadi lahayn karbaashka qoyan ee inna saaran isunna saarri lahayn ,mid shaal oo aynu inagu tolonay ah oo xariir ah unn huwan lahayn inaagu haddii aynu nahay Da,yarta iyo Dhalinyarada Jamhuuriyada Somaliland .
Da yarta iyo Dhalinyarada ayaa Maanta Qaranka badbaadintiisa horseed ka noqon karta kuma jirto ayaan aaminsanahay Da,aada 60, 70 ,80 ah ee dhinac walba iyo dheeg kastaba Qaranka ka diirtay walin u taagan inay sii diirtaan. Hadda ma ila socota Da,yarta iyo Dhalinyarada Jamhuuriyada Somaliland sidda xaal u jan-jeedho , mise waxan nahay kuwo dhadhan iyo udug ku haya, sidda Xaalka yahay Maanta , shalay iyo doraatoba , siddaas kale filaanay inay sidaa wax ku socdaan oo Qarannimada iyo Dawladnimada Jamhuuriyada Somaliland ku hanno-qaadaso Geeska afrika iyo Calamkanna aqoonsi buuxda iyo kaalin qaybteeda leh kagga geli karrata. Anniga haddi aragtidda aan dhiibto ilama aha ayaan aaminsanahay Aqoonsan oo dareensanahay. Waxa aan aamisanahay any ku jirto qabashadda Da,yarta iyo Dhalinyarada Hoganaka Qaranka inay tahay taa bedelaysa wax iyadda oo lagga fogaanayo cunfiga qaybiiliga ah ee inala degay Kheyr-keen iyo Kheyr-xigeeheenba inagga reebay.
Fikrada iyo Aragtida gaarka ah ee Muwaadinka Jamahuuriyada Somaliland .